Announcements – University of Computer Studies (Maubin)
The 11th Convocation at the University of Computer Studies (Maubin)
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်( မအူပင် ) ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်မှ ပဥ္စမနှစ်ထိ သင်တန်းများအားလုံး ကျောင်းအပ်စတင်လက်ခံမည့်ရက်
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မအူပင်)သို့ ၀င်ခွင့်ရစာရင်း
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်တွင် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မအူပင်)သို့ အသစ်၀င်ရောက်လာမည့်မောင်မယ်သစ်လွင်(၁၂၁)ဦးကို ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မအူပင်)မိသားစုမှ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါသည်။
MTCNA (MikroTik Certified Network Associate) September Class
👉👉👉MTCNA September Class👈👈👈 Date : September 9, 10, 11, 12 and 13 Class : MikroTik Certified Network Associate MikroTik Certified Trainer : Dr. Khin Mya Mya Thet 👉👉Course prerequisites 🌟The student must haveagood understanding of TCP/IP and subnetting. Read More …
“Myanmar National Cloud & AI Contest 2019” Register Now !
Myanmar National Cloud & AI Contest 2019 ပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်အတွက် စတင်စာရင်းသွင်းကြရအောင်! ဒီနေ့မှာတော့ Huawei Cloud ပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြုပြီး အက်ပလီကင်းရှင်းတစ်ခုကို ပြုလုပ်ရာမှာ လိုအပ်တဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေအပြင် ဉာဏ်ရည်တု (AI) နည်းပညာကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုလာနိုင်ရေးအတွက် လက်တွေ့သင်ကြားပြသခြင်း အစီအစဉ်တစ်ခုကို Huawei Myanmar ရုံးချုပ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပါမောက္ခချုပ်များကော်မတီနဲ့ Huawei Myanmar တို့ပူးပေါင်းကာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ နည်းပညာနဲ့ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ် Read More …